Montenegro Vs Romania - World Cup zvinodiwa | Soccer nezvakafanotaurwa
Match musi: 4 Sep 2017 | Posted: 4 Sep 02:02 2017 GMT + 2 | Tip aiona 594 nguva.
Montenegro Vs Romania – World Cup zvinodiwa
Montenegro Vs Romania – World Cup zvinodiwa, Montenegro vari 2nd mu Group E pamwe 13 pfungwa. Vane zvakafanana pfungwa sezvo Denmark asi vari aimutevera Poland vatatu pfungwa. Pashure pokunyora hunogutsa kukunda muKazakhstan mazuva matatu apfuura, vachava nechivimbo anopinda mutambo uyu. tariro yavo richisvika rechipiri gwapa muri vapenyu uye ivo vari nenzvimbo yepamusoro panguva mune chinhu chaizvo kunyange boka. They`ve anga akanaka hwakasimba pamusha uyu kutenderera, achikurovai Kazakhstan uye Armenia, apo kurasikirwa pfungwa chete kuPoland. Nokuti mutambo uyu Tumbakovic achava ake kukupfura chakazara pa kwetsvina.
Romania muri 4th ne 9 pfungwa, wakati yakanyorwa Unobata maviri chete pamwe nokuva pamusoro Armenia. Last mumwe, rakasvika mazuva matatu apfuura, aiva tsvarakadenga hazvigutsi mumwe, sezvo vakakwanisa kutyora vokuArmenia chete miniti 91st. Vakaita kurasikirwa chirango mu miniti 55th, asi zvakanga zvichiri hapana pedo achida kuita uye murombo nzira kuunza zvina-mutambo winless run kupera. Vakatarira hazvigutsi yose mitambo yavo parutivi kubva 5:0 achikurovai yeArmenia ivo dzinenge pasina chaicho mikana yokusvika panzvimbo yechipiri. Kufanana Montenegro, Romania vanofanira kuva pamwe zvizere kukupfura pano.
Montenegro akaratidza zvesimba runako zvakanaka panguva Qualifiers izvi, pamwe chete kukundwa pamusoro Armenia amire panze sezvo muenzaniso kunaka. Romania Ukuwo, dissapointed dzavo mharidzo uye migumisiro dzavo vanoratidza kuti. Montenegro vane musoro mikana asunga yechipiri gwapa muboka, kunyanya ndichiziva vachava naHama Denmark muna October pashure kwokurohwa avo okupedzisira kusangana. saka, vachange kutsvaka matatu pfungwa pano, uye vanotenda vanogona kuwana mushure zvakanaka anoratidza muna Kazakhstan. Kufunga Montenegro vari kutamba pamba, uye hwadzo nani pfungwa, I ndevokungoita navo favorite pano. Uye apo Romania aigona ukuye munhu stalemate, I can`t kuvaona kutora zvose zvitatu pfungwa. saka, Ichitsigirwa vanadzo 0 aasian akaremara sokuti rakaita nzira yakarurama kuenda.
Olympiacos Piraeus vs Tottenham ( pasi 2.5 zvinangwa & 1.90 )